Dawaarle Kunool USA oo Dharka uu iibiyo ku Qora Qabiilooyinka Soomaalida | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dawaarle Kunool USA oo Dharka uu iibiyo ku Qora Qabiilooyinka Soomaalida
Dawaarle Kunool USA oo Dharka uu iibiyo ku Qora Qabiilooyinka Soomaalida
Cismaan Axmed Abo, oo loo yaqaanno Oscar, wuxuu xirfadda harqaanle nimada ku shaqeysanayay muddo 40 sano ah. Isagoo hadda ka shaqeeya dalka Mareykanka ayuu BBC-da uga warramay noloshiisa iyo waxyaabaha khaaska ku ah xirfaddiisa.
Farsamo yaqaankan intii uu xirfaddan ku guda jiray wuxuu khibraddiisa shaqo ku soo qaatay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya, isagoo markii dambena u wareegay qurbaha.
“Markii ugu horreysay ee aan harqaanka billaabay da’deydu waxay ahayd 15 sano waxaana dagganaa magaalada Marko. Markii aan harqaanka sii bartay ka dib waxaan aaday Hargeysa, xilligaasna waxay ahayd 1977-kii”.
Hase ahaatee markii uu waddanka burburka ka dhacay, Oscar waxa uu u qaxay dalka Mareykanka wuxuuna halkaas kasii waday xirfaddiisa harqaanka.
Wuxuu noo sheegay inuu yahay harqaanlihii ugu horreeyay ee dharka uu tolo ku xardha magacyada qabiillada Soomaaliyeed, si loo xiiseeyo, loona iibsado.
“Soomaalida, rag iyo dumarba, maskaxdooda waxaa ku qufulan qabiil, marka waxaan ku fikiray inaan si karti iyo geesinimo leh dharka ugu soo xardho magacyada qabiillada. Waxaan u bareeray halis, ujeeddada aan ka leeyahayna waa inaan dadka Soomaaliyeed maskaxdooda ka tir tiro qabiilka habka ay u adeegsadaan. Xitaa hadda ka hor waxaa ii yimid wakiilkii hore ee xog-hayaha Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaali Nicholas Kay, wuxuuna iga dalbaday inaan u sameeyo labo funaanadood oo ay ku qoran yihiin magacyada qabiillada Soomaalida”.
Howshiisa harqaanlenimada waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay ganacsiga Shiinaha ee ku sii fidaya dalalka caalamka.
Waxa uu sheegay in gudaha Mareykanka si weyn looga iibsado dhar tolan oo lagu soo diyaariyay warshado ku yaalla dalka Shiinaha, kuwaasoo isaguna uu ku sii iibiyo dukaankiisa.
“Hadda dhar toliddii waaba la iska daayay, sababtoo ah alaabta ugu badan ee Mareykanka la keeno waxay ka imaataa Shiinaha, qiimaha dharka halkaas laga keenana waa mid raqiis ah oo lagu heli karo 10 doolar, marka suurta gal maba aha inaan dhar tolno, maadaama qiimahooda uu intaas ka sare marayo, arrintaas ayaana hoos u dhac u keentay ganacsigeenna”.
Sidoo kale Cismaan Oscar waxa uu soo saaraa dhar ay ku xardhan yihiin calamada maamul goboleedyada kala duwan ee Soomaaliya iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
“Calamada maamul goboleed yada waan ka sameeyaa dhar, waayo iyaga ayaa sameystay. Runtii waan ka xumahay arrintaas waana jeclaan lahaa in Soomaaliya ay hal noqoto, maamul goboleedyo badan ma fiicna, haddii aan hal calan yeelano na waxaan noqoneynaa dad adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay”.
Hase ahaatee caqabad kale ayuu Cismaan kala kulmaa calamada uu dharka ku xardho.
“Markii aan calamada ku sameeyo funaanadaha, waxaan ka war helayaa in la baddalay calamkii maamul goboleedka, taasina waxay igu tahay khasaare. Tusaale ahaan waxaan mar dhexdaas ah sameeyay kumannaan funaanadood oo uu ku xardhan yahay calanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, ka dibna waa la
Previous articleFaysal Cali Waraabe Oo Casuumay Wakiilkii Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya Eriday, Kana Hadlay Qorshaha Mac-hadka Heritage
Next articleDawlada Somaliland oo albabada u xidhay Beerta libaxyada ee hargaysa ee uu leeyahay Siyaasi warancade